တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလာအို နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Colonel Bounmyvieng VIENGNHOUTTHASAT နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-လာအိုနှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည့် အခြေ အနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကိုးကွယ်မှုဘာသာများ များစွာတူညီမှုရှိပြီး လာအိုနိုင်ငံတွင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များ ကူညီပံ့ပိုး ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရေးအတွက် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ၊ အားကစားအဖွဲ့များနှင့် အဆင့် အလိုက်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအပြန် အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန် ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံသံ အမတျကွီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာလာအို နိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Colonel Bounmyvieng VIENGNHOUTTHASAT နှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာ-လာအိုနှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရေးနှငျ့ပူးပေါငျးဆောငျ ရှကျမှုမြား တိုးတကျကောငျးမှနျလကျြရှိသညျ့ အခွေ အနမြေား၊ နှဈနိုငျငံယဉျကြေးမှုနှငျ့ ကိုးကှယျမှုဘာသာမြား မြားစှာတူညီမှုရှိပွီး လာအိုနိုငျငံတှငျ ထရေဝါဒဗုဒ်ဓဘာသာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ လိုအပျသညျမြား ကူညီပံ့ပိုး ဆောငျရှကျ ပေးနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံအကွားကုနျသှယျရေးနှငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာစရေေးအတှကျ ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြား၊ အားကစားအဖှဲ့မြားနှငျ့ အဆငျ့ အလိုကျခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအပွနျ အလှနျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံသံအမတျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျ ပေးအပျပွီး စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား လကျခံတှဆေုံ့ (ရုပျသံသတငျး)